‘अनमोलले छाडेका फिल्म खेल्नु मेरो खुबी’ : प्रदीप « Ramailo छ
‘अनमोलले छाडेका फिल्म खेल्नु मेरो खुबी’ : प्रदीप
फिल्म ‘लिलिबिली’ यही चैत ३० गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ । युवा स्टार प्रदीप खड्काकै कारण यो फिल्मको यतिबेला चर्चा छ । फिल्म लिलिबिली सहित प्रदीपसँग जोडिएका विविध विषयमा हामीले कुराकानी गरेका छौं :
लिलिबिली चल्छ । गीत र ट्रेलरले फिल्मप्रति प्रतिक्षा जगाएको छ । पुरै फिल्म बाहिर खिचेको कम नै छन् । यो सँगै ‘प्रेम गीत २’ पछि मेरो फिल्म झण्डै ९ महिना पछि आउँदैछ । यो हिसाबले पनि फिल्म चल्छ भन्ने लाग्छ ।
हरेक फिल्म परिक्षा
म प्रत्येक फिल्म रिलिज हुने बेला परिक्षाको रुपमा लिन्छु । ‘लिलिबिली’ मात्रै होइन । ‘प्रेम गीत’ र ‘प्रेम गीत २’ रिलिज हुने बेलामा परिक्षाको रुपमा लिएको थिएँ । मलाई ‘प्रेम गीत’ पछाडीको फिल्म पनि चल्न जरुरी छ । भोलिको दिनमा आउने फिल्म पनि त्यतिकै चुनौती छ र चल्नु पर्छ । अब चाहिं ढुक्क भएँ जे गरेपनि हुन्छ भनेर मैंले कहिले पनि सोच्दिंन । मलाई के विश्वास छ भने शुक्रबार र शनिबार दर्शकले साथ दिनु हुन्छ । आइतबारदेखि चाहिं फिल्म आफैं बोल्नु पर्छ ।
फिल्मको सफलता दर्शकको हातमा
म कुनै कवि होइन, म एक्लैले कविता लेखेरै बाँध्नलाई। एउटा गायकलाई त लेखक र संगीतकार चाहिन्छ भने फिल्ममा चार पाँच सयको जनाको सहभागीता हुन्छ । अझ फिल्म सफल हुन त लाखौं दर्शकको हात हुन्छ । म भनेको केही प्रतिशत मात्रै हो । ‘प्रेम गीत’ र ‘प्रेम गीत २’ टिम र दर्शकको कारणले चल्यो । लिलिबिली पनि यही कारणले चल्छ ।
सुदर्शन दाई र पूजासँग सम्बन्ध बिग्रेको छैन
सुदर्शन दाई (प्रेम गीत निर्देशक र नायिका) पूजासँग तिक्तता छैन । जहाँसम्म बोलचाल बन्द भएको कुरा छ, बोलचाल नै बन्द भएको चाहि होइन । भेट पनि भएको छैन, काम पनि परेको छैन । त्यस्तो बोलचाल नै बन्द भएको होइन् । ‘लिलिबिली’ गर्न थालेपछि ‘प्रेम गीत २’ को टिमसँग नै मेरो भेट भएको छैन । सन्तोष दाइसँगै मेरो एक दुई पटक भेट भएको छ । ‘प्रेम गीत’ भन्दा अगाडी ‘स्केप’ भन्ने फिल्म गरेको थिएँ, त्यो टिमसँग मैंले फेरी काम गरेको छैन । यही भएर उहाँहरुसँग सम्बन्ध बिग्रेको भन्ने त होइन नि ? ‘प्रेम गीत’ हिट भयो, त्यही भएर यसको मात्र कुराहरु आइरहेको छ । यति हो, धेरै मेकर्स हुनुहुन्छ । सबैसँग काम गर्न चाहान्छु ।
पूजासँग फिल्म खेल्छु
मैंले छान्ने भनेको स्क्रिप्ट र डाइरेक्टर हो, हिरोइन होइन । यो हिरोइन, यो क्यामेराम्यान लिनु पर्यो भन्यो भने त मैंले फिल्म बनाएँ भैहाल्यो नि ? मैंले सल्लाह दिन सक्छु तर यो नै राख्नुस् भन्न सक्दिंन । र, भनेको पनि छैन । यदि कुनै निर्देशकले मलाई र पूजालाई लिएर फिल्म बनाउँन चाहानुहुन्छ, स्क्रिप्ट मन पर्यो भने मलाई पूजासँग फिल्म खेल्न समस्या छैन ।
५० लाखसम्म अफर आएको छ
हो मैंले ‘लिलिबिली’ मा २२ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक लिएकै हो । यसमा थाइल्यान्ड र म्यानमारको राइटस् पनि लिएको छु । अब अफरको कुरा गर्ने हो भने त बढी नै आइरहेको छ । पारिश्रमिक रकम सहित सेयर र राइट्समा बस्दा झण्डै पचास लाखको हाराहारीमा अफर आएको छ ।
अनमोलको सेकेण्ड अप्सन हुंदा मलाई समस्या छैन
स्क्रिप्ट अफर गर्दा कसले के देख्यो के देखेन भन्ने हो । प्रेम गीत सुदर्शन दाइले अनमोललाई अफर गर्नु भएको थियो। अनमोलले कारण देखाएर गर्दिनं भनेपछि मैंले गरेको हुँ । यदि ‘लिलिबिली’ र ‘भैरवी’ पनि अनमोललाई अफर गरेर मैंले गरेको हुँ भने त्यो मेरो खुबी हो । अफर आएको फिल्म खेल्ने नखेल्ने आफ्नो कुरा हो । म अनमोलको सेकेण्ड अप्सन हुँदा पनि मलाई प्रोब्लम छैन ।
प्रतिस्पर्धा नै छैन
त्यस्तो प्रतिस्पर्धी नै भन्ने त छैन । दर्शक त्यही हुन् । अरुको फिल्म हेर्ने, मेरो फिल्म नहेर्ने भन्ने होइन । यस हिसाबले कम्पिटिसन नै छैन । बाँकी कुराकानी भिडियोमा हेर्नुस् :